Amagosa oKhuseleko lweLizwe athi aMabango okuba iNgxelo ilinganisa iSilogeni soMhlophe weSupremacist Zithiyori nje zeyelenqe. - Usnews
Amagosa oKhuseleko lweLizwe athi aMabango okuba iNgxelo ilinganisa iSilogeni soMhlophe weSupremacist Zithiyori nje zeyelenqe.
USusan Walsh / AP
ISebe lezoKhuseleko lweLizwe ngoLwesine lizichithile ithiyori iyelenqe elithe enye yeememo zayo ibonakala ngathi ilinganisa isilogeni esidumileyo sokuba abamhlophe.
Ushicilelo lweendaba ngoFebruwari lunesihloko samagama ali-14, ' Kufuneka sikhusele iBorder kwaye sakhe udonga ukwenza iMelika ikhuseleke kwakhona ,' nto leyo efana nokwakheka kwegrama yesilogeni esiqhelekileyo sokuba abantu abamhlophe bawongamele yonke into eyaziwa ngokuba 'Amagama ali-14': 'Simele siqinisekise ubukho babantu bethu nekamva labantwana abamhlophe.'
'Eli libali lokwenyani elikwiwebhusayithi esemthethweni karhulumente enesihloko esinamagama ali-14 aqala ngokuthi 'kufuneka sikhuseleke'. Oku akuyongozi. Kukho amaNazi okwenene-azibiza-ngamaNazi e-DHS, 'wabhala uLaurie Voss, umphathi kwinkampani yesoftware yase-Oakland npm.
Ikhadi yekrisimesi ye-diy
Eli libali lokwenyani kwiwebhusayithi karhulumente esemthethweni enesihloko esinamagama ali-14 aqala ngokuthi 'kufuneka sikhuseleke'. Oku akuyongozi. Kukho amaNazi okwenene-abazibiza-ngamaNazi e-DHS. https://t.co/Q01TRRpNaI
07:04 PM - 28 Jun 2018
Umnqolobi othanda ukongama omhlophe waqamba eli binzana ngoxa wayesentolongweni ngenxa yokuba nenxaxheba ekubulaweni kukanomathotholo wamaYuda eColorado ngowe-1984.
I-DHS, nangona kunjalo, iyikhabile ithiyori: 'Le yithiyori yelenqe ye-Twitter ethi ebusweni bayo iphantsi kwayo nayiphi na imithombo yeendaba ethembekileyo,' utshilo isithethi seli sebe kwingxelo.
Cav, igama lam yiWarsong @CombatCavScout
03:54 PM - 28 Jun 2018
Kodwa uVoss kunye nabanye kwimidiya yoluntu baxhoma i-theory yabo kwi-DHS besebenzisa inombolo ye-88 kwindawo yedatha: 'Ngokomyinge, amabango angama-88 aphumelele ukuhlolwa koloyiko oluthembekileyo, ngaphantsi kwe-13 ekugqibeleni kuya kubangela isibonelelo se-asylum.' Inani elili-1 488 luphawu oluqhelekileyo lokubonisa ukongama kwabamhlophe olubhekisela kuMazwi ali-14 nonobumba wesibhozo wealfabhethi, H, omela ibinzana elithi ‘Heil Hitler.’
isakhelo sekhabhathi yesakhelo
Amagosa e-DHS awazange achaze ngokukhawuleza ukuba kutheni beza kusebenzisa i-88 endaweni yento eqhelekileyo efana ne-100, eya kunika ipesenti ecacileyo ngakumbi. Nangona kunjalo, iReuters ingxelo , ecaphula idatha ye-US Citizenship and Immigration Services phakathi kukaJulayi noSeptemba 2016, amagosa okufuduka amkele malunga ne-88% yamabango oloyiko oluthembekileyo olufunekayo ukuze izicelo zokukhosela ziqhubele phambili.
UChris Hayes @chrislhayes
In re: isithuba DHS viral: inqaku kuphela 13 amanqaku bullet (kungekhona 14) kunye 88 kubonakala ukuba basebenza into yokuba 88% of abafaki-zicelo baphumelele udliwano-ndlebe oluthembekileyo. (Kodwa ipesenti esezantsi kakhulu inikwe indawo yokukhosela) https://t.co/dYKXM8HkMM
ukutyala nini iintyatyambo zasentwasahlobo
09:29 PM - 28 Jun 2018
Ithiyori yelenqe yavela njengokuphononongwa kweMfuduko kunye nokunyanzeliswa kweCustoms, eyinxalenye yeDHS, ikwinqanaba eliphezulu njengoko iingxoxo ziqhubeka ngomgaqo-nkqubo kaMongameli uTrump wokwahlula iintsapho zabaphambukeli kumda. Abaqhankqalazi baye umtyholwa I-ICE kunye ne-DHS yokuba 'yimibutho yabamhlophe eyongamileyo' ngokuvalelwa kwabo abaphambukeli.
UKevin Collier ufake isandla ekunikezeni ingxelo kweli bali.
Iindleko zetheyitile yekhitshi yokuthenga
ukuhombisa indlela yokungena
imibala yeendonga zasekhitshini
Iingcinga zokuvuselelwa kwezitepsi isitayile se-diy